शाओमी रेडमी के २०प्रोको मूल्य चीनमा कटौती, नेपालमा कहिले घट्ला बजार मूल्य ? - Technology Khabar
» Xiaomi » शाओमी रेडमी के २०प्रोको मूल्य चीनमा कटौती, नेपालमा कहिले घट्ला बजार मूल्य ?
शाओमी रेडमी के २०प्रोको मूल्य चीनमा कटौती, नेपालमा कहिले घट्ला बजार मूल्य ?
Technology Khabar ४ कार्तिक २०७६, सोमबार
रेडमी के२० प्रोको तस्विर
काठमाडौं । शाओमीको रेडमी सब ब्राण्डमा आएको के २० सिरिजका स्मार्टफोनहरु नेपाली बजारमा निकै लोकप्रिय रहेका छन् । हाल नेपाली बजारमा रेडमी के २० र के २० प्रो उपलब्ध छ ।
हालै यी दुबै स्मार्टफोनहरु शाओमीको एमआईयूआई ११ अपडेट पाउने डिभाइसहरुको सूचीमा पनि रहेका छन् ।
यसैबिचमा कम्पनीले रेडमी के २० सिरिजको मूल्य घटाएको छ । कम्पनीले चीनमा के २० प्रो स्मार्टफोनको मूल्य ४०० यूआन अर्थात करिब ५६ अमेरिकी डलर कटौती गरेको हो । अव ग्राहकहरुले चीनमा यो स्मार्टफोन २१९९ यूआनमा किन्न सक्नेछन् । यसअघि यसको लन्च गर्दाको मूल्य २५९९ अर्थात ३६७ डलर तोकिएको छ ।
हाल यो स्मार्टफोनको मूल्य चीनका प्रमुख स्टोरहरुमा राखिएको छ ।
रेडमी के २० प्रो रेडमी ब्राण्डमा आएको पहिलो फ्ल्यागशिप स्मार्टफोन हो । के २० प्रो सिरिजले रेडमीको फ्ल्यागशिप स्मार्टफोनहरु प्रतिको प्रतिबद्धता देखिने शाओमीका भाइस प्रेसिडेन्ट तथा रेडमी ब्राण्डका जनरल म्यानेजर लू बेईबिङ्गले भनेका थिए ।
यो फोनमा ६.३९ इन्चको एमोलेड फूल स्क्रीन डिस्प्ले छ । क्वालकम स्न्यापड्रागन ८५५ चीपसेट राखिएको फोनमा ८ जीबी र्याम तथा २५६ जीबी स्टोरेज रहेको छ । २० मेगापिक्सेलको पप अप क्यामरा रहेको फोनमा ४८ मेगापिक्सेल प्लस १३ मेगापिक्सेलको रियर क्यामरा राखिएको छ । फोनमा ४,००० एमएएचको ब्याट्री प्याक रहेको छ ।
नेपाली बजारमा पनि उपलब्ध रहेको रेडमी के२० प्रोको ८जीबी २५६ जीबी स्टोरेज फोनको मूल्य ५० हजार रहेको छ। तर अन्य बजारमा यसको ६ जीबी र्याम र १२८ जीबी स्टोरेज भेरिएन्ट पनि उपलब्ध छ ।
चीनमा मूल्य घटेसँगै के नेपालमा पनि मूल्य घट्छ त के २०प्रो स्मार्टफोनको भन्ने प्रश्न आएको छ ।
चीनमा मूल्यघटेसँगै नेपालमा पनि मूल्य घट्छ वा घट्दैन त्यो हेर्न भने केहि समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले चीनबाट मूल्य घटाउन शुरु गरेर भारतहुँदै नेपाली बजारमा पनि यसको मूल्य कम गर्न सक्दछ ।
चीनमा राखिएको नयाँ मूल्यको आधारमा हेर्ने हो भने नेपाली बजारमा साढे ८ हजारको हाराहारीमा मूल्य कटौती हुनुपर्नेछ । छिमेकी मुलुक भारत र नेपाली बजारमा यो स्मार्टफोनको मूल्य करिब समान जस्तै रहेको हुँदा भारतमा र नेपालमा एकैपटक मूल्य कम्पनीले घटाउन सक्नेछ ।
यस्तो छ सार्वजनिक भएको वान प्लस ५ , नेपालमा तीन सातापछि मात्र आउने
शाओमीद्वारा रेडमी ८ र रेडमी ८ए नेपालमा सार्वजनिक, ड्यूल क्यामरा सेटअप र ५,००० एमएएच ब्याट्री
मोटोरोलाको मोटो जी ८ स्मार्टफोन लन्च, यस्तो छ मुल्य र फिचरहरु
सामसङको ग्यालेक्सी ए सिरिजमा दुई नयाँ स्मार्टफोन भारतमा चाँडै सार्वजनिक हुने
तीन नयाँ आइफोन विभिन्न कलर अप्सनमा आउने, यसअघिको भन्दा सस्तोमा किन्न पाईने
शाओमीको आधिकारीक सर्विस सेन्टर ताम्राकार कम्प्लेक्सको पाँचौं तल्लामा, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सर्विस दिने